bhimphoto: यस्तो सोचौं
'फेरि एकपटक म मेरो गरिब देशमा छु । जहाँ बिजुली, इन्टरनेटलगायत सुबिस्तासहित छैनन् । त्यसैले म फेसबुकका पोष्ट, म्यासेजहरुलाई निरन्तर फलोअप गर्न सक्दिन २ नोभेम्बरसम्म क्षमाप्रार्थी ।' माथिका हरफ एक जना हितैषी दाईको गत विहीवार विराटनगरबाट गरेको फेसबुकको स्टाटसबाट पैचो लिइएका हुन् । उहाको यस्तो स्टाट्सलाई आठ जनाले 'लाइक' भन्दै मन परेको संकेत गरे । नौ जनाले कमेन्ट लेखे । अनुमति नलिइ यहाँ लेख्ने भएकाले नाम उल्लेख नगरी पनि उनीहरुको कमेन्टमात्र पढौं । यस्ता थिए ।
- हुन्छ नि हजुर । नेपाली सबैलाई इन्टरनेटको पहुँचमा कहा“ पुग्न सकिन्छ र । विदेशमा बसुञ्जेल हो रहेछ नियमित ।
- हुन्छ नि हजुर ।
- के गर्नु हाम्रो तीतो यथार्थ ।
- केही छैन दाजु । फेसबुकमा भन्दा आफ्नो मातृभूमिमा टेक्दा खुशियालीले फेसबुकलाई केही क्षणका लागि भुलाइ दिन्छ नि । होइन र ।
- भैगो नि त ।
- तपाइको देशभन्दा बढि धेरै फेसबुक चलाउनेहरु छन् ।
- केही समस्या छैन । धन्दा नमानौ ।
- आफ्नो देशलाई गरिब भनेपछि अरुले के भन्छ दाइ । मलाइ त सिक्किमबाट काकडभिटा आइपुग्दा तातो भएपनि आफ्नै देशको हावा मन पर्छ ।
- नो प्रोब्लेम दादा ।
धेरैले देशको ब्रि्रेको राजनीतिलाई दोषारोपण गरेर देश छाडेका छन् । विराटनगरको आदर्श बिद्यालय पढेका ती दाई हिजोआज उनी हाल नेदरल्याण्डको अल्टि्रचमा बस्छन् । १९९७ मा पब्लिक पोलिसी म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर र त्यसको तीन वर्षपछि न्युयोर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट इकोनोमिक पोलिसी म्यानेटमेन्ट विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनी यो दसैंमा नेपाल भ्रमणमा छन् । साथीका माध्यमबाट फेशबुके साथी बनेका ती दाजुलाई तीन दिनअघि उद्घोषकै कार्यालयमा स्वागत गर्न पाइयो । मलाइ उहाको व्यक्तिगत जीवनबारे अझै पनि धेरै थाहा छैन ।
विज्ञ व्यक्तित्व , साहित्यका रुची र बाहिर बसेपनि देशका बारे चासो र चिन्ता राख्ने व्यक्ति भनेर चिन्छु । मेरो बुझाइ , सोचाइ र देशका बारे मैले सोचेजस्तै सोच सबैको हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, मलाइ लाग्छ, केही समय बाहिर बसेपछि काम लाग्ने गिदी भएकाहरु देशमा हुनुपर्छ ।
समय परिवर्तन भएको छ । पढेकाहरु अझ पढ्न बाहिर जान्छन् । बाहिरै बस्दा रमाउँछन् । अनि उतै जान लालायित छन् । यहा श्रमको उचित मूल्य नपाएको अनुभव गर्नेहरुको लाम ठूलो छ । महिनाको हजारभन्दा बढि उनीहरु बाहिर पुगेका छन् । मेरो एउटा भाइ छ । काकाको एक्लो छोरो । लगातार जीमेल र फेशबुकको च्याटमा आइरहने । उसले एक दिन भन्यो ' दाजु, म कहा छु थाहा छ ।' मैले भने 'के कुरा गर्छस् † हेटौडा त हो नि ।' उसले भन्यो 'म त कोरिया आइपुगेको छु नि । थाहा छैन ।' मलाइ थाहा थिएन । उसले भनेपछि मात्र थाहा भयो । मैले उसलाई भन्नु नभन्नु भने । मेरो भावना उसको भन्दा फरक छ भन्ने लाग्छ । उ कम्प्युटरको हार्डवेयरको काम गर्थ्यो । महिनाको २५/३० हजार घरैबाट धाएर कमाउथ्यो । त्यति एउटा नेपालीका लागि पुग्ने कमाइ हो । जीवन चल्छ । सपना सबैका हुन्छन् । सबैले पछि हेर्दैनन् । अघि बढ्न नै चाहन्छन् । तर, जति गरेपनि जादा मान्छेले केही लादैन । जति परिश्रम, उपार्जन छन् , ती सबै छाडेर जानुपर्छ । छोराछोरी घरका लागि भर हुन् । अभिभावकका अत्यावश्यक बेलामा उनीहरु सगै उभिन सकेनन् भने ती भन्दा दुःख लाग्दा कुरा के हुन सक्लान् । उसले भन्यो 'म आइहालें । भनेजस्तो काम त छैन । तर, पनि केही महिना हेर्छु भएन भने फिर्छु ।' उसका कुरा ठीकै होलान् । तर, उ घर फिरोस् र, घरका लागि चाहिएका बेला उभिएको सुन्न पाइयोस् भन्ने मलाइ लाग्छ ।
धेरै बाहिर गएका छन् । इन्टरनेटको च्याटमा भेट हुदा देश चिन्ता गर्छन् । तर, यहा गर्नेका लागि कामका अवसर रहेछन् भन्ने उदारहण पनि नभएका होइनन् । गत आइतवार जर्मनीको बर्लिनमा डा. एल्ब्रेच्ट हेनिङ र उनकी पत्नि क्रिष्टिनाले क्वाडि्रका नागरिक पुरस्कार पाए । विश्वका विभिन्न भागमा नागरिक समाजका लागि केही गर्नेहरुलाई यो पुरस्कार दिइने रहेछ । जर्मनीमा जन्मेका डा. हेनिङ दुइ दसकदेखि लहानमा छन् । उनले त्यहा सगरमाथा चौधरी आखा अस्पताल सुरु गरे । अस्पताल लहानमा मात्र सीमित भएन । त्यो विराटनगरसम्म आइपुगेर मुलुकमै आखाका रोगीका लागि सबैभन्दा बढि सेवा दिने संस्था भएको छ ।
सबैमा बिशेषज्ञता हुदैन । तर, प्रयास नगरे केही हुन्न । जर्मनमा जन्मेका एक चिकित्सकले नेपालमा आएर केही गर्ने अभियान थाल्न सक्छन् भने नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न । सबै प्रयासहरु सानो अभियानबाट थालनी हुन्छ । सकारात्मक प्रयासका लागि सहयोगी हातहरु खोज्न सकिन्छ ।
सबैले डा. हेनिङ जस्तो अभियान चलाउछु भन्ने सम्भव नहोला । तर, आफुले सक्ने र घर नजिक रहेर गर्न सकिने धेरै कामहरु छन् । देशलाई बुद्धि र बल अनि सकारात्मक सोच भएकाहरुको खाचो जहिल्यै छ । नेदरल्याण्डका रहेर १९ वर्षपछि विरोटनगर फिरी यहाँको बिद्युत-इन्टरनेटको व्यवस्थालाई दोष दिनेभन्दा आफै केही अभियान थाल्नेहरु चाहिन्छ । दसैंका लागि विदा लिएर घर आएकाहरुले केही त्यस्तो सोचलाई कार्यरुप दिन चाहे कति जाती हुन्थ्यो होला ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:35 PM